Zokiolona - princetoncovid.org
Ivotoerana Senior Resource Center
Online vondrona mpanohana
Toeram-piraisana azo antoka ho an'ny zokiolona - Mampifandray amin'ny zokiolona ny programa tsy misy ny fanomezana sakafo tsy misy ifandraisany.
Virtual Namana trano programa - Ny mpiasan'ny PSRC no miditra amin'ny zokiolona Princeton amin'ny alàlan'ny telefaona na webcam.
Initiative Buddy mpiara-monina - Vonona hanampy ireo zokiolona ao Princeton ireo mpilatsaka an-tsitrapo. Fanazavana fanampiny Eto. Raha te hampifamatotra amin'ny mpiara-monina akaiky anao no hanolotra fanampiana anao, azafady misoratra anarana Eto.
Virtual Fireside Chat - Fihaonana amin'ny zoma amin'ny 2 ora hariva Drop-in hiresahana amin'ny namana vaovao amin'ny alàlan'ny solosaina, finday avo lenta na laharana an-tanety. Register Eto.
Fianakaviana jiosy sy serivisy ho an'ny zaza any Greater Mercer County
"Ora an-tariby," M, W, F, 609-987-8100, ext 0; vondrona mpanohana virtoaly mamorona, 609-987-8100, ext. 117 na mailaka; torohevitra manokana, fanekena medicaid, fanafody, olona tsy misy fiantohana ary fiantohana tsy miankina (fandoavam-bola narotsaka nandritra ny krizy), 609-987-8100, ext 102. Drop-In Hours, Support Group and Individual Services available in Spanish with bilingual counselors.
Dokotera / mpitsabo misotro ronono avy any amin'ny firenen-kafa mila
Ny Governemanta dia namoaka ny didim-pitondrana izay manome alalana ireo mpitsabo misotro ronono na avy any amin'ny firenen-kafa hanatevina ny ady amin'ny COVID-19. Ny filaharana dia manome hery ho azy ireo amin'ny adidy sivily amin'ny ezaka tsara finoana amin'ny fanomezana fikarakarana COVID-19. Afaka misoratra anarana ny olona tsirairay Eto. Tsy voasaron'ny baiko, fa ilaina ihany koa ny mpianatra amin'ny taona farany fitsaboana.
Tetikasa masinina marobe
Ny Council Council of Princeton dia manohana vola amin'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina mba hampindrana tanana hampitomboana ny saron-tava eo an-toerana. Azonao atao ny manolo-tena an-tsitrapo hanapaka lamba, ary / na manjaitra. Ireo masika efa vita dia ho azo alaina ho an'ireo izay mila azy ireo. Fanazavana fanampiny